Markay Instagram ka saarto jecelka ▷ ➡️ Kuwa raaca ▷ ➡️
July 11, 2019 0 comments 966
Waqtiga xaadirka ah, Instagram Waxay noqotay mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu caansan uguna wanaagsan. Iyada oo leh naqshaddeeda dareenka iyo astaamaha is-dhexgalka, waxay awood u siisay isticmaaleyaal badan inay si guul leh ula falgalaan. Hadda, waayadan dambe su'aal aad u soo noqnoqday ayaa ogaata marka Instagramku meesha ka saaro waxyaabaha jecel, oo waa in masraxa loogu talagalay in lagu tirtiro astaamaha qaarkood ee aqoonsaday sannado.
¿Markuu Instagram ka saaro waxyaabaha jecel? Waa su'aal wanaagsan in la isweydiiyo, laakiin sidoo kale waa muhiim sababta go'aankan. Jawaabta ay madalku soo saartay ayaa ah inaad rabto inaad adeegsadayaashu inay diirada saaraan waxyaabo badan oo ka kooban (sawirrada iyo fiidiyowyada) oo aan ku saabsana caanka abuuraha.
Markuu Instagram ka saarayo waxyaabaha la jecel yahay ?: Ogow sababta!
Haddii aad isweydiineyso su’aasha ah marka Instagramku meesha ka saaro waxyaabaha jecel, Waxaad gaadhay maqaalka lagu tilmaamay! Waqtigaan, barta Instagram ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin taxane ah oo lagu fulin doono labadaba bartiisa iyo Facebook, tan waxaa lagu soo koobay su'aasha joogtada ah ee dadka isticmaala isweydiinayaan marka Instagramku meesha ka saaro waxyaabaha jecel.
Su'aashan waxaa sabab u ah go'aanka in gebi ahaanba laga saaro birta la jecel yahay daabacaadaha. Sidoo kale, barta Instagram-ka ayaa raadineysa inay hirgeliso hannaan cusub, halkaas oo nuxurka uu ka habboon yahay qofka soo daabaca. Sidoo kale, iibsashada joogtada ah ee waxyaabaha jecel daabacadaha waa laga fogaanayaa.
Xaqiiqo ama suurtagal?
Waqtigaan, imtixaan ayaa lagu qaadayaa naqshad halkaas oo qofka raacsan uusan arki doonin waxyaabaha ay jecel yihiin. Waxaa loo arkaa inay macquul tahay, laakiin haddii la hirgaliyo, waxay gebi ahaanba beddeli doontaa habka shabakadaha bulshada ay u shaqeeyaan.
Ahaanshaha kuwa la jecel yahay ama "jecel" mid ka mid ah waxyaabaha ugu isticmaalka badan maanta, maahan wax aan caadi aheyn in la caddeeyo saameynta weyn ee ay ku yeesheen caafimaadka maskaxda qofka, iyo habka ay uga fikiraan naftooda ama kuwa kale
Laakiin inkasta oo, tani laga saaray sannado badan, waxay umuuqataa in Instagram ay si dhab ah u tixgelinayso, taas oo noo horseeda su'aasha ugu weyn ee marka Instagramku meesha ka saaro waxyaabaha jecel. Sidan darteed, baraha ayaa baaraya suurtagalnimada baabi'inta miyuusigga jecel si joogto ah. Wax ka beddelka kaliya ayaa noqon doona in kuwa raacsan aysan awood u yeelan doonin inay ku sawiraan xaddiga "jecel", laakiin daabacaadda ayaa si buuxda loo heli doonaa.
Maxaa dhacaya marka Instagram laga saaro waxyaabaha la jecel yahay?
Haddii ay dhacdo in Instagram go'aamiso in ay hirgaliso qaabkan, nooca cusub daabacaadaha ayaa soo bandhigi doona oo keliya "waxyaabaha la jecelyahay" ee wadaaga; Tirada kuwa jecel ma jiri doonto. Ujeedada ugu weyn ee madalku waa in meesha laga saaro fikirka wadajirka ah halkaas oo dadku ay ku oggolaadaan daabacaad sababta oo ah dadbadan ayaa jeclaa.
Si la mid ah, Instagram ayaa doonaya dadka isticmaala inay diiradda saaraan feejignaan dheeri ah oo ku saabsan tayada iyo asalnimada daabacaadaha. Fikradani waxay ku saleysan tahay xaqiiqda in isticmaaleyaal badani tirtiraan waxa ku jira oo keliya sababtoo ah ma helaan jawaab celin ku filan.
Sidoo kale, tartanku wuxuu isu dheelitiri lahaa dadka saameyn ku leh. Isbarbardhiga joogtada ah ee cidda leh falcelinno badan, lacagta inteeda badan ee magacyadu ku bixiyaan xayeysiinta dhamaadka maalinta ayaa isla dadka ay helaan.
In kasta oo isbeddelkani isbeddelo shabakadaha gebi ahaanba, isbadalku wuxuu si weyn saameyn ugu yeelan karaa habka aan u maareyno shabakadaha bulshada maanta. Si kastaba ha noqotee, tani waxay faa'iido u leedahay markii la dhimayo cadaadiska shabakadaha bulshada.
Hadda, waxkasta maahan wax wanaagsan. Isbedelka weyn ee noocan oo kale ah wuxuu u horseedi karaa saameyn aad u xun xun shirkadaha iyo boqolaal dad ah oo ganacsi ka sameystay shabakadan bulshada, iyada oo loo marayo xayeysiinta iyo dhammaan faa'iidooyinka ay u soo saarto magacyada.
Waxaa jiray dhowr isticmaale oo muujiyey sida ay ugu qanacsan yihiin warkii ogaanshaha marka Instagramku meesha ka saaro waxyaabaha jecel. Markii la ixtiraamo niyad jabkan, barta Instagram ayaa xaqiijisay inay tahay tusaalayn ay dadweynuhu arki doonin. Si kastaba ha noqotee, waxay cadeeyeen in yareynta cadaadiska ay soo saareen barta Instagram ay ka mid tahay ahmiyadaha ugu sareeya.
Markuu Instagram ka saarayaa waxyaabaha jecel?: Iibsashada waxyaabaha jecel iyo caannimada beenta ah
Xilliga ogaanshaha marka Instagramku meesha ka saaro waxyaabaha jecel Isticmaalayaal badan ayaa ka naxay. Fal-celintaani waa mid iska caadi ah sababtoo ah qadarka ganacsatada iyo shirkadaha xayeysiinta ah ee ka faa iidaystay astaamaha qalabkan. Si kastaba ha noqotee, barta Instagram ayaa muujisay sida ay uga go'an tahay inay yareyso cadaadiska ay abuurtay madal.
Sidoo kale, mid ka mid ah ujeeddooyinka waqtiga hirgelinta istiraatiijiyaddan ayaa ah in sumcadda beenta ah gebi ahaanba la baabi'iyo. Dhanka kale, waxay sidoo kale raadineysaa inay baabi'iso waxyaabaha jecel ee lagu soo iibsaday barta Instagram, taas oo ay ugu mahadcelinayaan isticmaaleyaal badan ayaa sameeyay macaash.
Waxaa laga yaabaa inaad daneyneyso: Halkee si ay u iibsadaan taageerayaasha Instagram?
Kala-leexashada caanka ah ee caanka ah
Hadafka Instagram waa in la yareeyo ama gebi ahaanba la baabi'iyo sumcadda beenta ah ee sawirada iyo fiidiyowyada. Tani waxay dhalisay in xaqiiqda shabakadda bulshada ay si buuxda u qalloociso. Dhanka kale, dhaqankan ayaa waliba dad badan oo been abuur ah u horseeday inay koraan.
Markii la hirgaliyo tallaabadan cusub, kuwa jecel waxay lumi doonaan muhiimad badan, iyagoo raadinaya inay abuuraan is-dhexgal wanaagsan. Waxyaalaha la jecel yahay way sii socon doonaan iyagoo muhiim ah, laakiin markan loo adeegsado tirakoobka algorithm iyo tirakoobka madal. Rajada weyn ayaa ah in tijaabadan ay natiijo fiican keeni doonto ama taa bedelkeeda waxay noqon doontaa fashil.
Sida tirinta: Waxay u muuqataa oo keliya kuwa daabacda sawirka
Iyada oo ay sii socoto caan noqoshada warbaahinta bulshada, waxaan aragnay sida walxaha muhiimka ah sida "jecel", "qalbiyada" iyo "suulka korka" ay u noqdeen. Iyo, aaladaha badankood waxay caan ku yihiin tirooyinkooda. Hadda, markaan aragno mid ka mid ah barnaamijyada ugu waaweyn sida Instagram-ka ayaa qorsheynaya inay tirtiraan tirinta la midka ah, waa wax iska caadi ah in dad badan laga xumaado.
Iminka, tirinta kuwa lamid ah lama tirtiri doono gebi ahaanba. Waxay u muuqan doontaa oo keliya qofka sameeyay daabacaadan. Fikradda guud ee waxaas oo dhami waa in la soo afjaro jaceylka waxyaabaha la jecel yahay, iyo sharadka waxyaabaha tayada leh. Sidan, adeegsadayaashu waxay diiradda saari doonaan waxyaabo badan oo ka kooban waxa ka yar iyo "caannimada" ay gaareen.
Isbeddelka lagu sameeyay madal ayaa aad khatar u ah, laakiin macquul ah. Muddooyinkaan dambe, shabakadaha bulshada ayaa aad hoos ugu dhacay tayo ahaan, iyadoo dadku ay aad u daneynayaan helitaanka waxyaabaha ay jecel yihiin oo aan ahayn abuurista waxyaabo wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, isbeddelkani wuxuu si toos ah u saameyn doonaa saameeyayaasha iyo summadaha shakhsiyadeed ee ku nool sumcadda ay soo saareen waxa ku jira.
Muhiimad ahaan, tani waa suurtagal oo keliya baaritaanno ayaa la sameeyay. Maanta, wax ka badalkan cusub lama heli karo illaa inta uu Instagram go’aansanayo inuu dhaqan geliyo iyo in kale.
Maxaa dhici lahaa haddii Instagram fuliso cabbirkan?
Iyada oo ku saleysan dhammaan tijaabooyinka la soo qaaday, khubaradu waxay go’aamiyeen in hirgelinta qaabkan cusub ay u horseedi karto labadaba saameyn caafimaad iyo mid taban oo nafsi ah bulshada guud ahaan.
Iyo, kuwa la midka ahi waxay noqdeen shidaalka kiciya goobo badan oo warbaahinta bulshada ah. Xitaa u horseedaysa qaar ka mid ah balwadda adeegsadaheeda; euphoria iyo qanacsanaanta markay jecelyihiin waa badan yihiin, iyo niyad jab marka ay yaryihiin.
Sidaas oo kale, khabiiro badan oo soo faragaliyay tijaabooyinkan, shabakadaha bulshada, si qaas ah u ah waxyaabaha jecel, ayaa ah dhiirigalin joogto ah oo ku tiirsanaanta bukaanka shabakadaha bulshada. Kuwani waa kuwa go'aamiya heerka oggolaanshaha ama diidmada ay dadku ka dareemaan bulshada.
Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa haddii faragelinta Instagram ay jiri laheyd wax is beddel ah. Waxaa loo tixgeliyay mid ka mid ah aaladaha ugu caansan ee lala socdo Facebook y Twitter, waxay gaari kartaa saameyn aad u weyn qaybaha bulshada. Dhanka kale, waxaa sidoo kale jira saameyn aan wanaagsaneyn oo ay dadku kala kulmaan niyad jab, sababtoo ah isku-kalsoonaantooda waxay kuxirantahay kaliya aqbalaadda ay ka heleen shabakadan bulshada.
Warshadaha jecel: Maxaa ku dhici doona iyada?
Maaha wax qarsoon qofna in saameeyayaasha caanka ahi ay caan noqdeen sannadihii ugu dambeeyay. Waxay caan u tahay iyada oo ay ugu wacan tahay in ay yihiin dad ay raacaan tirooyin aad u tiro badan oo adeegsadayaal ah, taasina waa sababta ay u soo jiitaan dareenka noocyada ganacsi ee la aqoonsan yahay ee doonaya in ay maal gashadaan sidaa darteedna ku taliyaan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda.
Tallaabadani miyey saameyn ku yeelan doontaa iyaga? Runtu waxay tahay in saameeyayaal badan ay doorteen in aysan sameynin, taa baddalkeed, ay qoraan cabirka in ay wanaagsan yihiin. Waxaas oo dhan maxaa yeelay hirgelinta qaabkan cusub wuxuu soo afjari doonaa saameeyayaasha beenta ah isla markana waxay soo ceshan doonaan macnaha dhabta ah ee saameynta ay ku leeyihiin shabakadaha bulshada. Gabagabadii, waxay ku soo gabagabeeyeen in waxa ugu muhiimsani ay yihiin is dhex galka iyo faallooyinka laga soo saaro daabacaadaha, ee maaha waxyaabaha la jecel yahay.
Iyada oo tan loo marayo, xaqiiqada iyo asalnimada daabacaadaha waa la soo kaban doonaa. Diiradda iyo xiisaha ayaa si aad ah ugu sii badan doona xagga tayada leh ee maaha dhinaca kuwa kuwa jecel. Sidoo kale, iibsashada waxyaabaha jeclaanta iyo kuwa been abuurka ah ayaa u kala bixi doona si isku mid ah.
1 Markuu Instagram ka saarayo waxyaabaha la jecel yahay ?: Ogow sababta!
1.1 Xaqiiqo ama suurtagal?
2 Maxaa dhacaya marka Instagram laga saaro waxyaabaha la jecel yahay?
2.1 Falcelinta isticmaalaha
3 Markuu Instagram ka saarayaa waxyaabaha jecel?: Iibsashada waxyaabaha jecel iyo caannimada beenta ah
3.1 Kala-leexashada caanka ah ee caanka ah
4 Sida tirinta: Waxay u muuqataa oo keliya kuwa daabacda sawirka
4.1 Maxaa dhici lahaa haddii Instagram fuliso cabbirkan?
5 Warshadaha jecel: Maxaa ku dhici doona iyada?
Halkee si ay u iibsadaan taageerayaasha instagram